Fanabeazana tsy mialonjafy :: Manampy ny zaza tsy tafiditra an-tsekoly ny fisian’ireo akany - ewa.mg
Fanabeazana tsy mialonjafy :: Manampy ny zaza tsy tafiditra an-tsekoly ny fisian’ireo akany
News - Fanabeazana tsy mialonjafy :: Manampy ny zaza tsy tafiditra an-tsekoly ny fisian’ireo akany
Iray amin’ireo akany afaka mandray an-tanana ny zaza tsy tafiditra mianatra an-tsekoly, noho ny fahasahiranan’ny ray aman-dreniny, ny Asa sekoly Avotra ho an’ny zaza Malagasy na Asama Avotra FFF, eny Anosimpatrana Atsinanana. Ankizy marobe no efa nandalo tao, nanomboka tamin’ny 2005, izay niorenany. Ankizy sivifolo no beazina ao, ankehitriny. Sady omena fanabeazana izy ireo no hiantohana sakafo ihany koa.
« Tsy nandalo fianarana mihitsy ny telopolo amin’izy ireo. Niato, efa ho herintaona kosa, ny enimpolo. Zaza kamboty sy mivelona eny amin’ny dabam-pako ny ankamaroany. Ireny no nangoninay sy nampidirina tato. Hofanina amin’ny asa tanana indray ireo tsy afa-panadinana na tsy te hiverina hianatra intsony », hoy Ravoninoro Mauril, tompon’andraikitry ny Asama.
Nosafidian’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Dr Sahondrarimalala Marie Michelle manokana ity ivontoeram-panabeazana ity, omaly, nandritra ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an’ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ary mikajy.
« Ireo olona marefo anaty fiarahamonina no tena iharan’ny tsy fahaizana manoratra sy mamaky teny ary mikajy. Rariny sy hitsiny raha toa ka mahatsiaro sy manatona azy ireo izahay, androany. Ao anatin’ny vinantsika ny fampidirana ny ankizy rehetra any an-tsekoly », hoy ny minisitra.
Tamin’io fotoana io no nanolorany fitaovana fanabeazana an’ireo ankizy ireo, toy ny Rakibolana, boky isaky ny taranja (ohatra ny kajy) ary niampy ireo kojakoja fiarovana amin’ny valanaretina Covid-19.
L’article Fanabeazana tsy mialonjafy :: Manampy ny zaza tsy tafiditra an-tsekoly ny fisian’ireo akany est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 09/09/2020
Covid-19 : Hopitaly 23 hovatsin’ny Unicef oxygène
Raha ny fivoaran’ny fitsaboana ny valanaretina Covid-19 amin’izao fotoana izao, mety hitombo avo roa heny, eny, mety hiakatra avo telo heny mihitsy aza ny fampiasana oxygène ato ho ato. Ny fahatsapana izany indrindra ny nahatonga ny Unicef hamatsy oxygène ireo hopitaly 23 manerana ireo faritra 17, mandray an-tanana ireo mararin’ny Covid-19, indrindra ireo tena marary mafy (forme grave). Araka izany, tonga amin’ny ilàna azy indrindra izao fa­nampiana izao. Fantatra ma­ntsy fa mandany tavoahangina oxygène 10 ny mararin’ny Covid-19 iray mandritra ny fitsaboana azy. Hatramin’ny 24 jona lasa teo, tavoahangina oxygène miisa 2 680 ny efa naparitaky ny Unicef any amin’ireo toeram-pitsaboana sa­mi­hafa mandray ireo mararin’ny Covid-19. Miovaova araka ny faritra ny vidin’ny tavoahangina oxygène iray. Mano­di­dina ny 108 000 Ar hatramin’ny 225 000 Ar, izany hoe, efa mahatratra 295 209 000 Ar (77 626 USD) ny vidin’ireo oxygène efa natolotry ny Unicef. “Tena zava-dehibe ny fiaraha-mientan’ny rehetra ahazoana mamonjy ny ain’ireo mararin’ny Covid-19”, hoy ny solontena mpisolo toerana eo anivon’ny Unicef Ma­da­gascar, i Jean-Benoît Man­has.M.R.L’article Covid-19 : Hopitaly 23 hovatsin’ny Unicef oxygène a été récupéré chez Newsmada.
Lozam-pifamoivoizana :: Lehilahy iray namoy ny ainy, olona efatra naratra voadonan’ny fiara
Maty tsy tra-drano ny lehilahy iray, dimy amby roapolo taona, voadonan’ny fiara tetsy Ankazomanga, omaly maraina. Olona efatra hafa naratra. Efa voatazona eny amin’ny polisy ny mpamily nitondra ny fiara nanao loza. «Nirimorimo nandeha mafy avy any ilay fiara tsy mataho-dalana. Nanidina mihitsy izy rehefa nandalo teo amin’ny dongona fampihenana ny hafainganam-pandeha. Nandona olona sy nifatratra teo an-tsisin’arabe, avy eo», hoy ny olona milaza ho nahita ny fisehon’ny loza. Nandona fiara iray marika « Peugeot 306 » nijanona teo an-tsisin-dalana io fiara tsy mataho-dalana io. Voadonany ihany koa ny olona telo nandeha an-tongotra teo akaiky teo. Namoy ny ainy teo no ho eo ny tovolahy iray, izay mipetraka eny amin’ny manodidina ihany. Naratra ny lehilahy iray, roa amby dimampolo taona sy vehivavy, roapolo taona. «Nizotra ho any Andraharo ity fiara nanao loza. Niezaka niala bisikileta iray teo alohany izy kanjo tavafoaka ny arabe. Ankoatra ny fiara sy ireo mpandeha an-tongotra voadona dia naratra ihany koa ilay mpitondra bisikileta teo alohany sy mpitondra môtô iray nanaraka azy tao aoriana», araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny polisy. Nitangorona ny olona. Nivoaka avy tao anaty fiara ary nafenina tao amina fivarotana iray teo akaiky teo ny mpamily, teo am-piandrasana ny mpitandro filaminana. Ny polisy ao amin’ny Borigady misahana ny lozam-pifamoivoizana (BAC), etsy Tsaralalàna, no misahana ny fanadihadiana. Nalain’ny fiara avy amin’ny Birao misahana ny fahadiovana (Bmh) ny razana. Naterina eny amin’ny hopitaly ireo maratra. L’article Lozam-pifamoivoizana :: Lehilahy iray namoy ny ainy, olona efatra naratra voadonan’ny fiara est apparu en premier sur AoRaha.
Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanamboarana ny kianja Barea Mahamasina, na teo aza ny fisian’ny valanaretina “covid-19”. Fantatra ary izao, taorian’ny fitsidihana ifotony nataon’ny mpanolotsaina manokan’ny filoham-pirenena amin’ny tetikasa an-tanan-dehibe sy ny fotodrafitrasa ary ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny alatsinainy lasa teo fa ho vita mialoha ny 14 oktobra ny fandrarahana ny «béton» amin’ny « tribune centrale». Aorian’izay, hisy akora atao eo amboniny, ho mateza tsara. Efa eo am-pamitana ny rihana fahatelo amin’ireo efatra hipetraka amin’ny “tribune centrale” ny orinasa CSCOD (China state construction overseas development), amin’izao fotoana izao.Ankoatra izay, hisy tohatra roa lehibe amin’ny sisin’ny “tribune”, ho fidirana any amin’ny rihana voalohany, izay mahazaka mpijery eo amin’ny 2904. Ho an’ny “gradin» vaovao indray, efa vita ny 90%, amin’izao fotoana izao, ny fototra miisa 172.Efa voarafitra ihany koa ireo fantsona hitondra ny jiro sy ny rano. Toy izany koa ny toerana hametrahana ireo birao isan-tokony sy ny toeram-pivoahana. Mahakasika ny kianja filalaovana, efa eo am-pamaranana ny fifantenana ny orinasa manokana hanatanteraka izany ny CSCOD, ankehitriny. Marihina fa bozaka natoraly, saingy misy fomba fanondrahana avy any ambanin’ny tany no hatao aminy. Hanomboka ny volana desambra ny fametrahana ireo fantsona fanondrahana ary aorian’ny fotoan’ny orana no hampitsiry ny bozaka. TompondakaL’article Kianja Barea Mahamasina: ho vita tsy ho ela ny “tribune centrale” a été récupéré chez Newsmada.
Maro ny tanora Malagasy sangany eo amin’ny soradihy. Samy manana ny mampiavaka azy izy ireny. Ankoatra ny fizarana fahaizana, mampiaraka izany amin’ny hetsika sosialy ihany koa i Julie Iarisoa. Anisan’ny misitraka izany ireo mpitsoa-ponenana, any ambanivohitr’i Tchad any.Hafa noho ny hafa ny sehatra nizaran’i Julie Iarisoa, mpanao soradihy ankehitriny tsy zovina amin’ny maro intsony, ny fahaizany sy ny traikefany eo amin’ity tontolon-javakanto iray ity, amin’izao fotoana izao. Nantsoin’ny fikambanana Ndam Se Na, tarihin’ilay mpanao soradihy Taigue Ahmed, any Tchad, ity mpanakanto malagasy ity.Izy no nosafidian’ny fikambanana hampiofana ireo mpampiofana dihy, ho an’ireo sokajin’olona sahirana, toy ny mpitsoa-ponenana noho ny ady, ny ankizy eny an-dalambe ary ny vondron’olona any anaty fianakaviana sahirana any. “Ny antony niantsoan-dry zareo ahy, noho izaho manao ilay tetikasa “Dihy ho an’ny rehetra”, ao amin’ny Espace Maray any Androndra. Eo koa ny fanaovako asa sosialy amin’ny alalan’ny dihy”, hoy ny fanazavan’i Julie Iarisoa.Tanjon’ny fanofanana ireo mpampiofana momba ny dihy, any Tchad, ny hanamafy ny traikefa momba ny dihy ho fitaovana hampivoarana ara-tsosialy any amin’ireo fianakaviana misedra fahasahiranana sy voatery mitsoa-ponenana noho ny ady. Efa vita ny iray volana nanaovana fiofanana teorika (ny 14 avrily hatramin’ny 14 mey teo). Tao anatin’ny fampiharana kosa izy ireo, taorian’io hatramin’ny androany.Manome atrikasa sy manao fampisehoana ho an’ireo mpitsoa-ponenana, any amin’ny sisin-tany, izay toerana misy ady matetika. Toerana ambanivohitr’i Tchad izy ireo, raha ny fanazavan’i Julie Iarisoa. Maharitra telo herinandro ny fampiharana, izany hoe hifarana ny faran’ity volana mey ity ary mbola hiverina any, ny volana septambra, hanohy ny atrikasa sy hanao tombana ny zava-bita.“Ho ahy manokana, manampy ny traikefa efa ananako ny fanofanana aty… Ahitana ny zava-misy, izay tsy mitovy ny any Madagasikara ary manosika ahy handroso hatrany amin’ny fizarana ny dihy eo amin’ny sehatra sosialy. Mpanao soradihy dimy izahay no manaraka ilay fiofanana”, hoy i Julie Iarisoa.Landy R.L’article Dihy ankehitriny – Any Tchad: mampiofana ireo mpitsoa-ponenana, ankizy sahirana i Julie I. a été récupéré chez Newsmada.
Avotry ny mpamonjy voina ihany: tovolahy marary saina nihanika “pylone”-n’ny Jirama
Hatairana ny an’ireo mpandalo sy ny mponina teny Anosizato, omaly maraina, manodidina ny tamin’ny 09 ora. Lehilahy tsy salama saina iray nihanika ny andrin-jiorn’ny Jirama teny an-toerana. Araka ny fantatra, mitondra herinaratra mahery vaika eny Anosizato io andrin-jiro io. Efa tonga teny amin’ny faratampony ralehilahy ka niantsoana ny sampana mpamonjy voina. « Vao naharay antso izahay dia nidina teny an-toerana avy hatrany. Efa teny ihany koa ny teo anivon’ny jirama », hoy ny fanazavan’ny lieutenant-colonel Razafimanahaka Tiana, lehiben’ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalana. Voatery notapahana, araka izany, ny herinaratra tamina faritra maro mba hisorohana ny loza. Isan’izany ny teny Ampitatafika, Itaosy, Ambohidrapeto sy ny manodidina. Voakasik’izany koa ny teny amin’ny digue, Andranoro, Ambohibao sy ny manodidina. Tapaka ihany koa ny herinaratra teny 67ha, Isotry, Isoraka sy ny manodidina. « Nananosarotra ny fampidinana ilay olona teny amin’ilay andrin-jiro », hoy ny fanazavana voaray. Manampy trotraka izany koa ny aavon’ilay andrin-jiro. « Antony mahasarobidy ny lanjan’ny fiofanana ataon’ireo mpamonjy voina », hoy hatrany io tompon’andraikitra io. Minitra vitsy taorian’izay, tafidina soa aman-tsara ilay tsy salama saina ary nalefa teny amin’ny hopitaly Befelatanana, sampana « neurologie ». Taorian’izay, tonga namonjy azy teny koa ny fianakaviany. Efa niverina amin’ny laoniny kosa ny famatsiana herinatra teo amin’ireo toerana voatanisa.Tsy nisy ihany koa ny aina nafoy sy naratra nandritra ny tranga. Henintsoa HaniL’article Avotry ny mpamonjy voina ihany: tovolahy marary saina nihanika “pylone”-n’ny Jirama a été récupéré chez Newsmada.
Fanolanana zazakely 6 taona: jiolahy iray voaheloka dimy taona an-tranomaizina
Fanamelohana sazy mihatra dimy taona an-tranomaizina ny nomen’ny fitsarana misahana ny ady heloka bevava ao Toamasina ny jiolahy iray nandritra ny fotoam-pitsarana ady heloka bevava, afakomaly, momba ilay raharaha fanolanana miharo herisetra tamina zazakely vao 6 taona monja.Maivana loatra ilay sazy nomen’ny fitsarana! Raha hiverenana ity raharaha ity, naolan’i Zara Michel, 25 taona, i Velotody Jessica, zazakely enin-taona, ny 27 jona 2018 tao Vohilengo, Fenoarivo Atsinanana. Raha ny fanazavany nandritra ny fitsarana azy, nantsoiny nanaraka azy hiditra tao amina efitrano iray tsy misy olona ao Vohilengo ilay niharam-boina ka nentiny avy hatrany teny ambony fandriana nanaovany ny filàn-dratsiny. Nikiaka ilay tsy manan-tsiny ka nofatorany lamba ny vavany. Rehefa vita ny filany, norahonany tsy hiteny na amin’iza na amin’iza ilay niharam-boina fa hovonoiny raha miteny amin’olona, araka ny fanazavan’ilay voampanga hatrany. Tsikaritry ny renin’ilay zaza anefa ny fihetsik’ity zanany somary hafahafa ka nanontaniany ary nambaran’ity niharam-boina ny anaran’ilay jiolahy nahavanon-doza taminy. Tokony homena ny sazy faran’izay henjana itony mahavita fihetsika mamoafady amin’ny ankizy tsy ampy taona itony. Any ivelany, fanamelohana ho faty na figadrana mandra-pahafaty ny mahazo ny olona manao fihetsika mamoafady na manolana ankizy toy izao.Sajo sy Jean ClaudeL’article Fanolanana zazakely 6 taona: jiolahy iray voaheloka dimy taona an-tranomaizina a été récupéré chez Newsmada.
Tsara ny mihetsika saingy: tsy laharam-pahamehana ny seho ivelany
Famerenana ny Malagasy ho eny an-doharano, hono! Ilaina maika tokoa ny fanatanterahana izany satria tsy hisy raha manjary eto raha tsy resy lahatra ny Malagasy fa Malagasy izy sy ny momba azy. Tsy laharam-pahamehana ny fanaovana izany endrika ivelany fotsiny. Te hoderaina, te hojerena, te hodokafana, te hiavaka… Ka aleo manao malabary, asiana mpikabary ny “fety” atao. Aleo ireo tarika mpanao « gasigasy » no alaina, sns! Raha tsy ireo karazan-toetra mirefarefa amin’ny tany ireo no miala ao amin’ny Malagasy, tsy ho tafiditra ao aminy mihitsy ny maha izy azy.… Noho izany, mila hampahafantarina ny Malagasy fa manana ny maha izy azy izy ka tsy voatery hitelin-drora manoloana ny kolontsaina sy ny zavakanto ary ny fomba amam-panao avy any ivelany. Io asa goavana io no tsy ampy any anivon’ny tokantrano, eny amin’ny fiarahamonina, sns, hany ka mahazo vahana rehefa mety ho endrika ivelany.Fa maninona ireo ray aman-dreny no tsy afaka mampiaina sy mampahafantatra ny zanany ny kolontsaina sy ny zavakanto ary ny fomba amam-panao malagasy? Fa maninona ireo raiamandreny no manaiky sy manara-davahana fotsiny amin’ireo fanaovana tsinontsinona ny maha Malagasy?… Satria ilay endrika ivelany fotsiny no isalorana fa tsy latsaka anaty akory ilay fiainana sy fahafantarana ny maha Malagasy!HaRy Razafindrakoto L’article Tsara ny mihetsika saingy: tsy laharam-pahamehana ny seho ivelany a été récupéré chez Newsmada.
COVID-19: Statistique du 24 Septembre 2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Statistique du 24 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Bilan epidemiologique du 24 Septembre 2020 Ce 24 Septembre 2020, Madagascar enregistre 24 nouveaux cas sur 284 tests effectués. 8 des ces nouveaux cas sont localisés dans la région Diana, 5 nouveaux cas dans la région d’Analamanga, 5 nouveaux cas dans la région Alaotra Mangoro, 2 nouveaux cas dans la région Menabe, 1 nouveau cas dans la région Itasy, 1 nouveau cas dans la région Haute Matsiatra et 1 nouveau cas dans la région Anosy. Par contre, 14 883 personnes sont totalement guéries du Covid-19 car ce jour, 45 personnes rétablies sont recensées par le CCO-COVID-19. De ce fait, 1129 patients suivent encore des traitements dont 15 presentent des formes graves. Par ailleurs, une personne a succombé au coronavirus, portant à 227 le nombre total des personnes décédées du Covid-19. Rappelons nous que depuis le debut de la pandémie, Madagascar enregistre 16 191 personnes contaminées.L’article COVID-19: Statistique du 24 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
COVID-19: Statistiques du 25 Septembre 2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Statistiques du 25 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.D’après le bilan quotidien sur la situation de pandémie de Covid-19 à Madagascar rapporté ce vendredi 25 septembre, 30 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus sur les 277 échantillons analysés. Ainsi, la Grande Île compte 16221 cas de contaminations depuis le mois de mars. La répartition de ces nouveaux cas se présente comme suit: 10 cas à Analamanga, 7 cas à Alaotra Mangoro, 4 cas à Matsiatra Ambony, 7 cas à Diana, 1 cas à Atsimo Andrefana et 1 cas à Menabe. Actuellement, 14867 d’entre eux sont déjà guéris, ce qui porte à 1124 le nombre des patients encore en traitement. Toutefois, ce qui est rassurant est qu’il ne reste plus que 11 formes graves sur ces cas actifs. Par ailleurs, 34 guérisons ont été annoncées et un nouveau victime. Désormais, le pays compte 228 décès liés au coronavirus. L’article COVID-19: Statistiques du 25 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Mitaky vahaolana momba ny tranon’ny mpianatra ny Seces
Naneho hevitra eo anatrehan’ny fatiantoka lehibe mianjady amin’ny mpianatra sy ny oniversiten’Antananarivo amin’ny ankapobeny tamin’ny loza nitranga tao Ankatso II, oniversiten’Antananarivo, ny faran’ny herinandro lasa teo, ka nahamay ny Bloc Amicale fonenan’ny mpianatra eny amin’ny oniversite ny Seces sampana Antananarivo. Manantena izy ireo fa hisy fandraisana andraikitra ahazoana toky fa tsy hiverina eo anivon’ireo Anjerimanontolo miankina amin’ny fanjakana sy ireo foibem-pikarohana nasionaly intsony ny loza toy ireny. Mampahatsiahy sy manaitra ny fitondram-panjakana ny mpikambana ao amin’ny Seces amin’ny maha zava-dehibe ny fametrahana ny mpianatra amin’ny trano fonenana manara-penitra, hahafahan’izy ireo miaina sy mianatra ao anatin’ny filaminan-tsaina tanteraka.May ny trano vondro ipetrahan’ny mpianatraNohamafisin’ny birao fa vahaolana maika, azo tsapain-tanana sy mahomby ary maharitra hamahana ny olana no ilaina momba ny tranon’ny mpianatra. Zava-misy mahamenatra sy vato misakana amin’ny fahatrarana ny kalitao no sady tsy mendrika ny fampianarana ambony ny fotodrafitrasa misy amin’izao fotoana izao. Mankahery ireo mpianatra niharam-boina ny mpampianatra mpikaroka satria tsy mora ny mamoy ny trano fonenana sy ireo entana ary fitaovana entina manatanteraka ny fianarana.Vao tsy ela akory no may ny trano vondro ipetrahan’ny mpianatra miisa 62 any Maninday.VonjyL’article Mitaky vahaolana momba ny tranon’ny mpianatra ny Seces a été récupéré chez Newsmada.
Ho an’ny tany mahantra: manampy ny G20 amin’ny fanalefahana trosa
Fanalefana trosa na fanafoanana izany avy amin’ny mpamatsy vola mahazatra ho an’ny tany mahantra. « Fanomezana farany » ahafahan’ny fanjakana mizaka trosa hafa any amin’ny sehatra tsy miankina. Nanomboka izany fanalefahana na fafoanana trosa izany ny mpikambana ao amin’ny G20*, ny volana avrily tamin’ity taona ity, rehefa tafiditra amin’ny tany afrikanina maro ny Covid-19.Iaraha-mahalala ny fitotongan’ny toekarena ankehitriny, ilàna famatsiam-bola ho an’ny firenena tsy ampy vola (PFR)*. Antony nahatonga ny G20 nandray fepetra ho fanalefahana ny trosa amin’izay firenena afrikanina mangataka izany. Miombon-kevitra, ohatra, ny fanjakana eoropeanina sy ny banky hanitatra izany any amina sehatra tsy miankina, hanamaivana ihany koa ny trosan’izy ireo.Misy ihany ireo mpampiasa vola niala an-daharana, na miasa ihany fa misafidy mampihena izay azo ahena, toy ny isan’ny mpiasa, ny sehatra trandrahina. Mifidy tombom-barotra kely fa mizotra ny raharaha, toy izay mampiasa volabe nefa mety hiteraka fatiantoka goavana. 6 000 miliara dolara ny fanitarana tetibola avy amin’ireo banky foibe ao amin’ny G20, nandraisana anjara amin’ny toeran’ireo sahirana noho ny fihanaky ny valanaretina, manampy amin’ny fiatrehana ny trosan’ny firenena sasany. R.MathieuG20*: Ahitana firenena 19 miampy ny Vondrona eoropeaninaPFR*: Pays à faible revenuL’article Ho an’ny tany mahantra: manampy ny G20 amin’ny fanalefahana trosa a été récupéré chez Newsmada.
Tarika Kafa: nodimandry Randrianarisoa Richard
« Nifanafatra foana, nifanome fotoana, indrindra tato ho ato, nifanao andraso andraso”… Iray amin’ireo tononkira nampalaza ny tarika Kafa tany ho any amin’ny taona 1983. Nindaosin’ny fahafatesana, ny 21 septambra teo, Randrianarisoa Richard, fantatra teo amin’ny tontolon’ny hira tamin’ny anarana hoe Kafa, fanafohezana ny “Kalo no fahafinaretana”. Raha ny heno, efa amam-bolana tsy salama i Richard Kafa. 61 taona izy izao nodimandry tany Analavory izao. Iray amin’ireo tarika nanana ny naha izy azy tany ho any amin’ny taona 1985 ry Kafa. Tononkira tsotra, gadona tsy niala lavitra ny funk ny nampitan’i Richard sy ireo namany ny hafatra tao anatin’ny sanganasany. Iray amin’ireny ny “Tanisan’ny manina” (Isan’ny amontana, roa ny aviavy …).Raha ny fandaharam-potoana, anio amin’ny 9 ora maraina no hiala ao an-tranony ao Miadanarivo ny nofomangatsiakany, aorian’ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra. Handalo ao amin’ny PK 41 Mangatany Arivonimamo amin’ny 11 ora maraina ary hasitrika ao amin’ny fasan-drazany Ambohimandroso Arivonimamo avy eo.Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana manontolo sy ny tontolon’ny zavakanto malagasy ny Gazety Taratra.Nanangona: HaRy RazafindrakotoL’article Tarika Kafa: nodimandry Randrianarisoa Richard a été récupéré chez Newsmada.
Fisorohana ny valanaretina: nisintaka tany ambanivohitra ny ankizy
“Noho ny faharefoan’ny ankizy raisina an-tanana ao amin’ny akany, nisintaka mihitsy tany ambanivohitra ny zaza sy ny mpikarakara nandritra ny fihibohana hisorohana ny fahazoan’izy ireo ny tsimokaretina”, hoy ny mpitantana ny akany fandraisana. Nikatona tanteraka ny akany eny Mahamasina. Antso amin’ny finday fizarana vaovao sy fandefasana vola amin’ny finday ny tantsoroka natao ireo ray aman-dreny rehetra tohanan’ny ONG.Nisy nanala fanadinana CEPE ny ankizy tohanana ary afaka soa aman-tsara avokoa fa roa kosa no niala an-daharana noho ny fahasahiranana tao anatin’ny fihibohana. “Zavatra mampalahelo izany nefa izahay koa, niala teto amin’ny akany ka sarotra ny faharaha-maso ny ankizy », hoy ny fanazavany ihany. Ankehitriny, efa miverina tsikelikely amin’ny fiainany ny akany sy ireo asa rehetra nataon’ny ONG ho tantsoroka amin’ny fianakaviana. Hatramin’ny taona 1988 niorenan’ny akany, 180 mahery ny ankizy nobeazina sy noraisina an-tanana tao. Nivoatra tsikelikely ny toeram-pandraisana izay niandoha tamin’ny zaza roa voan’ny aretina raboka ka nalain’ny mpanorina notsaboina tao an-tokantranony. Avy amin’ny fianakaviana sahirana monina eny amin’ny faritra iva: Andavamamba, Anatihazo, Itaosy, Ambatomaro … ireo ankizy beazina ao. Betsaka ny antso azo nandritra ny fihibohana fa noho ny antony ara-pahasalamana, tsy afa-nanoatra ny mpitantana. Vonjy L’article Fisorohana ny valanaretina: nisintaka tany ambanivohitra ny ankizy a été récupéré chez Newsmada.
Ho fitandroana ny fiarahamonina: mila fehezina ny biby tsy hanelingelina ny manodidina
Araka ny toko faharoa miresaka momba ireo tabataba isan-karazany mety hanelingelina ny fiarahamonina ao amin’ilay “Fehezam-pitsipika monisipaly misahana ny fikoloam-pahasalamana”, mila fehezina ny feo mety hanakotaba ny hafa.Ao amin’ny sokajy fahefatra, andininy faha- 79 momba ny kotaba ataon’ny biby, tsy maintsy mandray fepetra manokana rehetra hisorohana ny fanelingelenana ny manodidina ny tompon’ny biby. Mila mampiasa amin’ny fomba rehetra hanerena ireo biby tsy hikorontana miverimberina sy mafy, toy ny fehivava, ny fanofanana, indrindra koa ny fampidirana azy an-trano raha hiala ny toeram-ponenana ny tompony. Voakasik’izany indrindra ny alika.Ao amin’ny sokajy faharoa ny momba ny fampiasana fitaovan-jaridaina maneno mafy. Ireo asa fanamboarana na ny fanaovan-jaridaina ataon’ireo olona manokana amin’ny alalan’ny zavatra na ny fitaovana mety hiteraka fanelingelenana ny manodidina noho ny hamafin’ny feo, toy ny fanapahana ahitra misy motera, ny fanapahana, ny fandavahana, ny fikikisana na ny fanapahana mekanika dia tsy azo atao afa-tsy amin’ireo andro fiasàna, amin’ny 8 ora 30 hatramin’ny 12 ora sy amin’ny 1 ora 30 hatramin’ny 7 ora 30 hariva. Eo kosa ny asabotsy amin’ny 9 ora hatramin’ny 12 ora sy amin’ny 2 ora hatramin’ny 5 ora hariva.Milaza ny andininy faha-78 fa tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra ireo mponina amin’ny toeram-ponenana na ireo miankina aminy mba tsy ho voakorontan’ny feo avy amin’ny tranony ireo mpiara-monina manodidina, toy ny vata famoaham-peo, ny firaketam-peo, ny fitaovana fandrenesam-peo sy ny fahitalavitra, ny zavamaneno, ny fitaovana maneno, ny fitaovana an-tokantrano sy ireo feo ateraky ny fanaovana kiraro mafy faladia na fanatanterahana asa na kilalao tsy mifanaraka amin’ireo trano ireo.Tatiana AL’article Ho fitandroana ny fiarahamonina: mila fehezina ny biby tsy hanelingelina ny manodidina a été récupéré chez Newsmada.